imprimante + l'intervention de l'utilisateur est
Dzimwe nguva Printer yako inogona kupa imwe yekukanganisa meseji - Kupindira kwemushandisi kunodiwa ako Windows 10/ 8 / 7 komputa paunopfuurira kudhinda mamwe magwaro. Kana ako Printer haizodhinda uye iwe unogashira akadai mameseji ekukanganisa kazhinji, heano mashoma ekugadzirisa matambudziko angakubatsira.
Printer haichadhindwi, Mushanduri Anopindira Anodikanwa
1] Tarisa uone kana chero magetsi achipenya paphirita uye ita shuwa kuti zvese zvinongedzo zvinogadzirwa mushe.
2] Vhura Printer. Dzivisa tambo yemagetsi kubva mudhindaizi zvakare kubva kunobva simba remagetsi. Mirira kweminiti. Zvichakadaro, dzosera komputa yako. Komputa painenge yakakwenenzvera desktop, sunga tambo mumadziro simba sosi uyezve kumashure kweche printer wozobatidza Printer.
3] Dzosera kana kukanzura iro Prinda mutsara.
4] Famba services.msc kuvhura iyo Open Services Manager uye tarisa kana Spooler Service iri kumhanya. Kana zvisiri, Zvitange. Kana iri kutamba, Tangazve iyo Windows Sevhisi. Kana iwe ukatarisana nenyaya neSevhisi, mhanyisa iyo Dhinda Spooler Kuchenesa Kuongorora kubva kuMicrosoft. Iyo inobvisa isiri-Microsoft kudhinda processors uye monitors. Pamusoro pezvo, inounganidza ruzivo rwepamusoro nezve anodhinda akadhinda uye komputa, senge ruzivo nezvematyairi anodhinda, maprinta, basic networking, uye failover kusanganisa uye inopa dzakasiyana siyana nzira dzekuchenesa.
5] Shandisa yakavakwa-mukati Printer Troubleshooter.
Kuunza yakavakwa-Printer Troubleshooter, vhura Run bhokisi, nyora zvinotevera uye rova ​​Enter:
Iwe unogonawo kumhanya Hardware Hardware.
6] Tangazve kudhinda gwaro uye ona kana izvozvo zvichibatsira. Kuti uite izvi, vhura Control Panel> Zvese Control Panel Zvinhu> Midziyo uye maPrinta. Sarudza purinda, tinya kurudyi pairi uye sarudza Ona zvinyorwa.
Mu Dhindare Dhivhiza chimiro bhokisi chinovhura, tinya pane Document tab uye sarudza Dzorerazve.
7] Tarisa uone kana paine Dhivhizha zvinyorwa zviripo padhinda rako kubva pawewebhu remugadziri. Mune rimwechete iro Dhindaina chinongedzo chimiro bhokisi, tinya pane Printer uye sarudza Update Driver.
8] Ichiripo, pasi pePrinta tab, ita shuwa kuti Pause Printing uye Shandisa Printer Offline zvemukati hazvina kubatwa.
9] Kana uchishandisa HP printer, mhanya iyo HP Dhinda uye Scan Chiremba uye uone kana ichibatsira kugadzirisa dambudziko.
10] Kana wabatanidza printer munzvimbo ino, chinja USB Port uone.
Tarisiro chimwe chinhu chinobatsira!
Mamwe magwaro achakubatsira kugadzirisa nyaya dzine chokuita nemapirita:
Default Printer inoramba ichichinja
Iko kukanganiswa 0x803C010B panguva yekutarisa mapiritsi
Mutemo wokupura unotumira Tumira kune OneNote, Save As, Tumira Fax, nezvimwe, mabhokisi ekukurukurirana
Windows haibvumire iwe kupurinda anopfuura gumi nemashanu mafaera